Monywa University Of Economics – Just another WordPress site
ဘောဂဗေဒဌာနသည် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တည်ဆောက်ရာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် ဘောဂဗေဒပညာရှင်များ မွေးထုတ်ပေးရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာဘောဂဗေဒပညာရပ်များကို သင်ကြားပေးလျက်ရှိသည့် အဓိကဌာနကြီး တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် အစိုးရဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးနှင့် NGO, INGO များတွင် တာဝန်ယူလျှက်ရှိသော စီမံခန့်ခွဲသူများ၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှု အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုပညာမဟာဘွဲ့ (MPA) သင်တန်းကိုလည်း ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ဘောဂဗေဒဆိုင်ရာ ဘွဲ့ကြိုတန်းအတွက် လိုအပ်သောဘာသာရပ်များကို ဖြည့်ဆည်း သင်ကြားပေးလျှက်ရှိသည့်အပြင် ဘွဲ့လွန်တန်းများဖြစ်သည့် မဟာတန်းနှင့်ပါရဂူတန်း များကိုပါဖွင့်လှစ်လျှက်ရှိပါသည်။.
၀ါဏိဇ္ဇဗေဒဋ္ဌာနသည် ကူးသန်းရောင်းဝယ်မူဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ၊ အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲမူပညာ၊ ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်သည့် စာရင်းကိုင်ပညာရပ်များ ငွေကြေးနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းပညာရပ်များ၊ ဈေးကွက်စီမံခန့်ခွဲမူပညာ၊ လူသားအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမူပညာရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်သည့် စာရင်းကိုင်ပညာရှင်များကို မွေးထုတ်ပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဝါဏိဇ္ဇဗေဒနှင့် စာရင်းကိုင်းပညာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချပေးသော အဓိကဋ္ဌာနကြီး တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဝါဏိဇ္ဇဗေဒဋ္ဌာနသည် ဘွဲ့ကြိုတန်းများဖြစ်သော ဝါဏိဇ္ဇဗေဒဘာသာရပ်နှင့် စာရင်းကိုင်ပညာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိသည့်အပြင် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများဖြစ်သည့် မဟာတန်းနှင့်ပါရဂူတန်းများကိုပါ ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိပါသည်။ ထိုပြင် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်ဖြင့် မည်သည့်ဘွဲ့ရများမဆို လေ့လာသင်ယူနိုင်သည့် ပညာရပ်ဖြစ်သော အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လေ့လာမူဆိုင်ရာသင်တန်း (CABS) သင်တန်းကိုလည်း ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။
စာရင်းအင်းပညာဌာနသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးတို့၏ လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိရောက်မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်စေရန်၊ အနာဂတ်ကာလများအတွက် စီမံကိန်းများချမှတ်တတ်လာစေရန်နှင့် အနာဂတ်အခြေအနေများကို ကြိုတင်ခန်.မှန်းမှုများ ပြုလုပ်တတ်လာစေရန် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကို စာတွေ့လက်တွေ့ပေါင်းစပ် သင်ကြားပြသပေးလျှက် ရှိပါသည်။
ထို့ပြင် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက် ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကို ထိန်းချုပ်ရာ တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနည်းလမ်းများ၊ ဈေးကွက်အခြေအနေများကို သိရှိနိုင်ရန် ဈေးကွက်သုတေသနလုပ်နည်းလုပ်ဟန်များကို သင်ကြားပို့ချပေးသော အဓိကဌာနကြီး တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းပြည်တစ်ခု၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စီမံကိန်းများရေးဆွဲရာတွင် မရှိမဖြစ် သိရှိရန်လိုအပ်သော လူဦးရေစာရင်းအင်းပညာ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအညွှန်းကိန်းများ၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးစာရင်းအင်းပညာရပ်များ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းများနှင့် အာမခံလုပ်ငန်း များတွင် အရေးပါသော ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အာမခံဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းဘာသာရပ်များ၊ နယ်ပယ် အသီးသီးတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော သုတေသနလုပ်နည်းလုပ်ဟန်များကိုလည်း သင်ကြား ပို့ချပေးလျှက်ရှိသော ဌာနကြီးဖြစ်ပါသည်။
စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာနသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို စီမံခန့်ခွဲရာ၌ တွေ့ကြုံရမည့် စိန်ခေါ်မှုများကို ထိရောက်စွာ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့် အရည်အချင်းပြည့်ဝသော စီမံခန့်ခွဲမှု ကျွမ်းကျင်သည့် မန်နေဂျာများ၊ခေါင်းဆောင်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ကို မွေးထုတ်ပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်များကို သင်ကြား ပို့ချပေးသော အဓိကဌာနကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာနမှ သင်ကြားပို့ချလျှက်ရှိသော ဘွဲ့ကြိုနှင့်ဘွဲ့လွန်တန်းများမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဘွဲ့ (BBA) အပြင် မည်သည့်ဘွဲ့ရများ မဆို လေ့လာသင်ယူနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှုပညာမဟာဘွဲ့ (MBA) သင်တန်းများကိုလည်း ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
အသုံးချဘောဂဗေဒဌာနသည် အိမ်ထောင်စုများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစိုးရနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့် အဆင့်အတန်းကို စနစ်တကျ လေ့လာဆန်းစစ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုသည့် ဘောဂဗေဒအခြေခံ ဘာသာရပ်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘောဂဗေဒ၊ နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘောဂဗေဒဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိသော အဓိကဌာနကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေများ နှင့်နိုင်ငံများ၏ အတွေ့အကြုံများကို လေ့လာနိုင်ရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘောဂဗေဒ၊Globalization၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံများ၏ဖွံ့ဖြိုးမှု ဆိုင်ရာများ အစရှိသည်တို့ကိုလည်း သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။.
ပုံမှန်ဘွဲ့ကြို/ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများသာမက ဘောဂဗေဒနှင့်ပတ်သတ်သော အခြေခံ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အသိပညာများကို အချိန်တိုအတွင်း မည်သည့်ဘွဲ့ရများမဆို လေ့လာဆည်းပူးနိုင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း (Dip. DS) ကိုလည်း ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပါသည်။
ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအတွက် လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် စာတမ်းငယ် ရေးသားပြုစုရာတွင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကျေးရွာဒေသများသို့ လေ့လာရေးခရီးသွားခြင်း၊ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သုတေသနဆောင်ရွက်မှုများအဖြစ် စိုက်ပျိုးရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေး နယ်ပယ်များတွင် အထူးပြုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
Published by winchotun at
Rebajas Golden Goose Como en la manera de ganar riquezas de marketing del grupo o individuo Suministros
En esencia, las familias tienen que mirar positivamente tener su línea de organización de marketing en la perfección de la misma Zapatillas Golden Goose anera increíblemente […]
Published by user 1 at
Das Leben Nach Der Einführung Seminar-Arbeit Wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sind, während des Downloads, eine Präsentation zum Download, haben der Verlag […]
Family Health Nursing Theories – the Conspiracy
Get the Scoop on Family Health Nursing Theories Before You’re Too Late Wellness is the conscious maturation of the entire self. It is imperative to the […]
မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းရှိ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ စီးပွားရေးနှင့်ဆိုင်သော ပညာရပ်များကို လေ့လာသင်ကြားရာတွင် ပိုမိုထိရောက် လွယ်ကူစေရန်အတွက် စီးပွားရေးကောလိပ်တစ်ခုကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့အရှေ့ဘက်၊ ကျောက္ကာလမ်း တောင်ဘက်၊ ဇလုပ်ကျေးရွာအနီး၌ မြေဧက (၂၀ဝ) ပေါ်တွင် ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့တွင် အုတ်မြစ်ချခဲ့ပါသည်။
မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ရှိ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများရရှိသော ပညာသင်ဆုများမှ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
စီးပွားရေးပညာချွန်ဆု – (၂၆)ဦး (တစ်နှစ် ၈သိန်းကျပ်)
မီဇူဟိုပညာသင်ဆု – (၂၅)ဦး (တစ်နှစ်’$ ၃၀ဝ )
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှု (Rural Development)
ကုန်သွယ်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု (Trade & Investment)
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု (Agricultural Development)
codes is the best and only way to unlock in app purchases for free.
© 2020 Monywa University Of Economics. All Rights Reserved.